Bollywood / Hollywood – Page3– Fursad Nepal
बोल्दैनन् काजोल र करण जोहर ?
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on बोल्दैनन् काजोल र करण जोहर ?
टोबायोग्राफी ‘एन अनसुटेबल ब्बोइ’ मा करणले काजोलसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरेका थिए । हालै भएको एक कार्यक्रममा काजोललाई लिएर करण भड्किएको समेत बताइयो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार टिभी सो ‘दिल है हिन्दुस्तानी’ मा करण जोहर जज रहेका थिए ।जब यस सोमा काजललाई गेस्ट अतिथिको रुपमा ल्याउने कुरा चल्यो तब करण यस विषयलाई भड्किए । उनले करण र काजोल …
दीपिकाको फरक लुक्स
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on दीपिकाको फरक लुक्स
दीपिका पादुकोणको फिल्म ‘पद्य्मावती’ को सुटिङ जारी छ । फिल्ममा दीपिकाको साथमा रणवीर सिंह पनि देखिनेछन् । तर कुरा फिल्मबाट हटाएर गर्यो भने दीपिका कयौँ ब्राण्डहरुको ब्राण्ड एम्बेस्डर छिन् । जसलाई लिएर उनले इंस्टाग्राममा फोटोको सिरिज नै सार्वजनिक गरेकी छिन् । स्मरण रहोस्, दीपिकाले यो फोटोसुट एक फेसन ब्राण्डको लागि गराएकी हुन् । दीपिकाले ब्राण्डको कपडाहरुको फोटो इंस्टाग्राममा राखेकी छिन् …
गर्लफ्रेन्ड दिशाको साथमा यो फिल्ममा डबल रोलमा देखिन सक्छन् टाईगर
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on गर्लफ्रेन्ड दिशाको साथमा यो फिल्ममा डबल रोलमा देखिन सक्छन् टाईगर
टाईगर श्राफ यतिबेला आफ्नो फिल्म ‘बाघी २’ को तयारीमा ब्यस्त छन् । तर उनदे हालै ट्वीटरमा जुन भिडियो सेयर गरेका छन् जसको कारण यतिबेला उनको चर्चा चल्न सुरु भएको छ । बाहिरको हल्ला सुन्ने हो भने टाईगर फिल्ममा डबल रोलमा देखिने छन् । खासमा भिडियोमा टाईगर डबल रोलमा देखिएका छन् । फिल्मको सुटिङ गत महिनाबाट सुरु भईसकेको छ । फिल्ममा …
छोरी सुहानाको साथ नयाँ लुकमा देखिएन शाहरुख खान
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on छोरी सुहानाको साथ नयाँ लुकमा देखिएन शाहरुख खान
शाहरुख खान उनको १७ बर्षिय छोरी सुहानाको नयाँ फोटो बाहिर आएको छ । यो फोटोमा बुवाछोरीलाई एकदमै कुल लुक्समा देखिएको छ । फोटो कलर र ब्ल्याक एण्ड ह्वाईट दुवै स्टार्यलमा छ । शाहरुख खानले यो फोटो ट्वीटरमा शेयर गरेका छन् । शाहरुख खानको छोरी १७ बर्षकी भएकी छिन् र उनले बलिउड फिल्ममा काम गर्न चाहन्छिन् । उनी लण्डनको स्कुलमा पढाई …
यी हुन् साउथ इंडियाका सबैभन्दा महंगो भिलेन
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on यी हुन् साउथ इंडियाका सबैभन्दा महंगो भिलेन
साउथ इंडियन फिल्मका भिलने सुदीपले केहिदिन अघि आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् । सुदीपलाई हिरोको भन्दा भिलनेको भुमिकामा धेरै अफरहरु आउने गर्छ । उनी साउथ इंडियन भिलेनहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने भिलनेको रुपमा अगाडी आएका छन् । उनले एउटा फिल्मको लागि ६ करोड रुपैँया लिन गर्छन् । हालै उनले एक फिल्मको लागि ६ करोड रुपैँया लिएको भारतीय मिडियाहरुमा उल्लेख गरिएको छ …
यी बलिउड अभिनेत्रीको मृत्युको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै, भनिन्- ‘म जिउँदै छु’
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on यी बलिउड अभिनेत्रीको मृत्युको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै, भनिन्- ‘म जिउँदै छु’
टीभी अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठीको मृत्युको खबर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै गएको छ। लोकप्रिय टीभी सिरियल ‘ए है मोहब्बते’ की मुख्य पात्र दिव्यंकाको मृत्युको खबरले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ।यस्तो खबर सुनेपछि उनले आफु जिउँदै भएको भन्दै ट्वीट गर्नुपरेको छ। यसअघि यस्तो हल्लाको सिकार अभिनेता कादर खान, दिलीप कुमार आदि भइसकेका छन्।दिव्यंकाको मृत्युको खबरले उनको फ्यान निकै दुखी भएका थिए। फ्यानहरुले …
यसकारण रानीलाई आफ्नो फिल्ममा राख्न चाहन्छन् संजय दत्त
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on यसकारण रानीलाई आफ्नो फिल्ममा राख्न चाहन्छन् संजय दत्त
बलिउडका मुन्ना भाई संजय दत्त को आगामि फिल्मका लागि उनका फ्यानहरु पर्खाइमा रहेका छन् । यस्तै मा उनको फ्यानहरुको लागि खुसीको खवर आएको छ । बताइएअनुसार निर्देशकको रुपमा डेब्यु गर्न लागेका आरम्भ कुमारले संजय लाई आफ्नो पहिलो फिल्म ‘मलंग ‘का लागि साईन गराउन चाहेका छन् । यसका साथै ‘आरम्भ’ फिल्ममा संजय दत्त को साथमा रानी मुखर्जी लाई खेलाउन चाहन्छन् । …
अनुष्का शर्माको फिल्म सेटमा दुर्घटना, एकको मृत्यु
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on अनुष्का शर्माको फिल्म सेटमा दुर्घटना, एकको मृत्यु
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माको आउँदो चलचित्र ‘परी’ को सेटमा भएको दुर्घटनामा एकको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटना कोलकातामा भएको हो जहाँ अनुष्का र परमव्रत चटर्जी दक्षिण २४ परगना जिल्लाको कोरोलबेरियामा उक्त फिल्मको सुटिङ गरिरहेका थिए । २८ वर्षीय शाह आलम नामका प्राविधिकको करेन्ट लागेका कारण मृत्यु भएको हो । दुर्घटनापश्चात् सुटिङ रद्द गरिएको छ । मृतक शाह आलम उत्तर …
सुशान्तले फिर्ता गरे ४ करोड
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on सुशान्तले फिर्ता गरे ४ करोड
बलिउडका चक्लेटी अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले सम्झौता गरिसकेको फिल्म छोडेबापत ४ करोड फिर्ता गरेका छन् । उनले ‘रोमियो अकबर वाल्टर’ फिल्ममा काम गर्ने सम्झौता गरिसकेपछि अचानक छोडेका हुन् । उनले फिल्ममा सम्झौता गर्दाताका लिएको ४ करोड निर्मातालाई फिर्ता गरिदिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । व्यस्त रहेका कारण फिल्ममा आफूले काम गर्न नसकेको उनले जनाएका हुन् । कुनै बेला बलिउडमा …
बाबा रहिमको कारण समस्यामा फसिन् आलिया
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on बाबा रहिमको कारण समस्यामा फसिन् आलिया
बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहरिएका बाबा राम रहिमको कारण बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट समस्यामा परेकी छन्।उनी मेघना गुलजारको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘राजी’को शुटिङको लागि पटियाला पुगेकी थिइन्। जब शुक्रबार राम रहिमको विरुद्द फैसला सुनाइयो तब हिंसाको घटना सुरु भयो। त्यस घटनापछि आलियाको शुटिङ नै रद्द भएको भारतीय पत्रिका मिड डेले जनाएको छ।निर्देशक मेघनाले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा शुटिङ गर्नु उचित नभएको भन्दै शुटिङ …